अचम्मको फौजी कमिला : जसले सिंगो गैंडालाई नै तीन दिन चत पारिदिन्छ, भने पुल बनाएर खोलासमेत पार गर्छ (भिडियो सहित) ! – Ujyaalo Patrika
अचम्मको फौजी कमिला : जसले सिंगो गैंडालाई नै तीन दिन चत पारिदिन्छ, भने पुल बनाएर खोलासमेत पार गर्छ (भिडियो सहित) !
कमिलाको एउटा यस्तो जाति पनि हुन्छ, जसले पुल बनाएर खोलासमेत पार गर्छ !
एउटा म’रेको सिंगो गैंडालाई नै तीन दिनभन्दा पनि कम समयमा सफाचट पारिदिने कमिलाको प्रजाति पनि हुन्छ !
–यो कुरा सुन्दा तपाईं हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो कुरा कुनै कहानी वा कथा नभएर यथार्थ कुरा हो । यस्तो अचम्म लाग्ने कमिलाको प्रजातिको नाम हो– फौजी कमिला (Army Ant) । कमिलाको संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो प्रजाति हो– फौजी कमिला ।
यो कमिलाको केही प्रजाति त कतिसम्म डरलाग्दो र घा’तक हुन्छ भने, अफ्रिकामा पाइने केही फौजी कमिलाको समूहले त आफ्नो बाटोमा म’रेको एउटा गैंडा नै फेला परे पनि त्यसलाई तीन दिनभन्दा कम समयमा नै सफाचट पारिदिन्छ । यसरी गुँड नबनाउने, यताउता हिँडिबस्ने यो कमिलाले आफनो बाटोमा फेला पर्ने जेसुकै जिउँदो चीजलाई पनि शिकार बनाउन पुग्छ । यस कमिलाको
समूहले फेला परेपछि शि’कार उम्कन गाह्रै पर्छ । विशेष गरी विस्तारै घस्रने सरिसृप तथा स्तनधारी जीवहरु र मृ’त जनावरहरु यसको आहारा बन्न पुग्छ । तर यस कमिलाले आफ्नो बाटोमा ख’तरनाक माकुरा, बिच्छी जस्ता डरलाग्दा जीवहरु फेला परे पनि बाँकी राख्दैन । आकारमा २.५ सेन्टिमिटर अर्थात् १ इन्चसम्मको हुने यो फौजी कमिला शिकारलाई धुजाधुजा पारेर हज्जारौं टुक्राहरु हुने गरी टोक्छ । यो कमिलाको केही प्रजाति त कतिसम्म ड’रलाग्दो र घा’तक हुन्छ भने, अफ्रिकामा पाइने केही फौजी कमिलाको समूहले त आफ्नो बाटोमा मरेको एउटा गैंडा नै फेला परे पनि त्यसलाई तीन दिनभन्दा कम समयमा नै सफाचट पारिदिन्छ । त्यसैले के भनिन्छ भने, केही गरेर यो कमिलाको समूह अफ्रिकामा मानिस बसोबास गरेको क्षेत्र भएर आयो भने, त्यहाँ गाउँका गाउँ नै खाली हुन्छ ।
रोचक के छ भने, फौजी कमिलाका समूहभित्र श्रमिक कमिलाहरुमाझ नै पनि फौजमा जस्तै अधिकारी र सिपाहीहरु समेत हुन्छ । यस कमिलाको समूहमा अधिकारी कमिलाको हुक आकारको ठूलो बंगारा र डस्ने अंग हुन्छ । फेरि यस कमिलाले फौजले दुश्मनको क्षेत्रमा छापा मा’रेजस्तै गरी शिकार गर्ने गर्छ । यसरी छापा मा’र्दा यस कमिलाले एकैचोटी १४ मिटर (४५ फिटभन्दा बेसी) क्षेत्रलाई घेराउ गर्छ र एक मिनेटमा करीब ३० सेन्टिमिटरको दूरी पार गर्दै आक्रमण गर्छ । यसरी छापा मार्दा यस कमिलाले घेराउ गरेको क्षेत्रभित्र रहेका कीरा फट्यांग्राहरु, विच्छी, माकुरा, सर्प, उड्न नसक्ने चराहरु जीवित बच्न मुश्किलै पर्छ । यसले फेला परेका जति सबै जीवहरुलाई टोकेरै मा’र्छ ।
लगातार बसाइ सरिरहने प्रवृत्तिको भए पनि यो कमिलाले कुनै स्थानमा विश्राम गर्दा वा अस्थायी बसोबास गर्दा दशौं हजार कमिलाहरु मिलेर आ–आफ्ना खुट्टाहरु एकआपसमा जोडेर एउटा ठूलो गोला बनाउँछ । यसरी कमिलाहरु मिलेर बनेको गोलाको भित्र अन्य फौजी कमिलाहरु र बीचोबीचमा रानी कमिला सुरक्षित रुपमा बसेको हुन्छ ।
बाटोमा समूहबद्ध भएर हिँडिरहेको बेला कुनै खोला नाला आइपर्यो भने यो कमिलाले गुँड बनाएकै तरीकाले एकापसमा खुट्टाहरु जोडेर जीवित पुल नै बनाउँछ, जसले गर्दा अन्य कमिलाहरु त्यो पुल भएर ती खोलानालाहरु समेत पार गर्छन् । रोचक कुरा के छ भने, यो प्रजातिका कमिलाहरु पानीभित्र समेत १८ घण्टासम्म डुबेपनि मदैन, जीवित नै रहन सक्छ । गुँडमा नबसे पनि यो फौजी कमिलामाझ पनि अन्य कमिलाहरुमा जस्तै काम र जिम्मेवारीको राम्रो बाँडफाँड भएको हुन्छ । त्यसैगरी, यसो कमिलाले पनि खानेकुराहरु बाँडचुँड गरेर खाने गर्छ । कतिसम्म भने, यदि एउटा कमिला भोकाएको छ तर अर्को कमिला टन्न पेट छ भने, टन्न पेट हुने कमिलाले भोकाएको कमिलाको लागि आफ्नो पेटबाट खानेकुरा ओकलेर खान दिन्छ ।
Previous भारतले हजारौं टन सुन उत्खनन गर्दै : सुन उत्पादनमा अमेरिकापछि दोस्रोमा भारत . .
Next ‘यौ’,न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग ‘यौ’,न स,म्पर्क गर्दा बढी मिल्छ ?